Ifektri yethu ibineminyaka eyi-10, futhi sihlala sizama konke okusemandleni ukuhlinzeka ngemikhiqizo efanelekile kumakhasimende ethu, sihlola zonke izingcezu ngaphambi kokuthumela, sithemba ukuthi yonke into esesandleni samakhasimende ethu yinhle futhi iyafaneleka. Imikhiqizo yabadala ayinele kuphela, ukuze kunikezwe izinketho eziningi kumakhasimende azokhetha.Lonyaka sithuthukise izinto ezintathu, lezi zinto zinokubukeka kwesimanje nge-function function.Izingcezu ezimbili zomoya compressor nocezu olulodwa lwe-vacuum cleaner, ake sibheke.
I-CY102-16, le nto iyi-compressor yomoya eyisilinda ephindwe kabili, zonke izingxenye zensimbi ezinamandla amakhulu.it ibukeka njengokulalelwayo, ngokukhonjiswa kwe-LED, kulula ukuyisebenza, futhi imiswe ngokuzenzekelayo, inika ikhasimende umuzwa ongcono wokusebenzisa yenza imibala ehlukene yamakhasimende, umkhiqizo uzoba muhle kakhulu.
Le nto isiqedile ukuklanywa, sizokwakha i-morden design nomzimba omncane wayo, ngakho-ke kuzoba lula ukuyiphatha, uma ikhasimende lifuna, singafaka ibhethri ngaphakathi, lingavuselelwa kabusha nge-USB nganoma iyiphi ipulagi. njengoba ingasetshenziswa ngaphandle kocingo, ilula kakhulu futhi ingonga isikhathi esiningi sabasiki .noma incane, futhi ingafaka isondo ngesikhathi esifushane.Ungakhathazeki ngentengo, isakhanga.
I-VC-113 iyisihlanzi esisha sokuhlanza, inomzimba omncane, namandla amakhulu okuncela, ibukeka njengenkomishi, ongayibeka noma yikuphi lapho ufuna khona, esihlalweni semoto noma kusofa ekhaya, ayisoze yavumela wena phansi ngenxa yokubukeka okuhle.it kulula kakhulu ukususa uthuli negranule, ngisho nekhofi elichitheke ngokunganaki.Singenza imibala eminingi ehlukile yekhasimende, bese siphrinta ilogo emzimbeni wemikhiqizo.
Ngonyaka omusha, besingabambisana namakhasimende amaningi futhi sibe nabangane abaningi emhlabeni, ngikholwa ukuthi kuzoba unyaka omuhle!